करपाटी भनेको के हो ?
► VAT मा दर्ता भए नभएको, VAT लाग्ने वा कर छुटको वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने करदाताको पहिचान गराउने प्लेट ।
क–कसले कस्तो कस्तो करपाटी राख्नुपर्छ ?
VAT मा दर्ता भएका करदाताले हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो अक्षर ।
VAT लाग्ने वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने तर थ्रेसहोल्ड भन्दा कमको कारोवार भई दर्ता गर्नु नपर्ने करदाताले पहेंलो पृष्ठभूमिमा कालो अक्षर ।
VAT छुट भएका वस्तु वा सेवाको कारोवार गर्ने करदाताले सेतो पृष्ठभूमिमा रातो अक्षर ।
करपाटीको आकार कति हुनुपर्छ ?
► उँचाई १० से.मी. र लम्बाई ३० से.मी. ।
करपाटी कहाँ राख्नुपर्छ ?
► करदाताको कारोवारस्थलमा सबैले स्पष्ट देख्ने ठाउँमा ।
करपाटी नराखेमा के हुन्छ ?
► ऐन तथा नियमावली बमोजिम करपाटी नराखेको खण्डमा वा तोकिएको ठाउमा करपाटी नराखेमा पटकै पिच्छे दुईहजार रुपैयां जरिवाना लाग्छ ।
करपाटी कहिलेसम्म राखी सक्नु पर्दछ ?
► दर्ता भएको ७ दिन भित्र कारोबार स्थलमा सवैले देख्न सक्ने गरी राख्नु पर्दछ ।